မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည် ရဲ့အရောင်များက ပြောနေတဲ့ - Hello Sayarwon
မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည် ရဲ့အရောင်များက ပြောနေတဲ့ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေး
မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည် (Vaginal discharge) တွေဟာ အမျိုးသမီး မျိုးပွားအင်္ဂါစနစ်ထဲကသန့်ရှင်းရေးပိုင်းကို တာဝန်ယူထားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးလမ်းကြောင်း (vagina) နဲ့ သားအိမ်ခေါင်းထဲက ဂလင်းတွေ စစ်ထုတ်တဲ့ အရည်တွေဟာ ဆဲလ်အသေတွေနဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို အပြင်ထုတ်ပေးပြီး မွေးလမ်းကြောင်း သန့်ရှင်းရေးနဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်ဆင်းခြင်းဟာ အမျိုးသမီး တော်တော်များများမှာ ပုံမှန်ဖြစ်တတ်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ ဓမ္မတာ စက်ဝန်းလာတဲ့ အချိန်ပေါ် မူတည်ပြီး မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်တွေရဲ့ အနံ့နဲ့ အရောင်တွေဟာ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ မျိုးဥကြွေချိန်၊ နို့ချိုတိုက်ကျွေးချိန်နဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်တက်ကြွမှု ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမှာ မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်တွေဟာ ပိုများနိုင်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးပေါ်မူတည်ပြီး မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အနံ့အသက်က ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို သာမန်ပြောင်းလဲမှု တွေလောက်က ဘာမှ စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အရောင်နဲ့ အနံ့တွေက သာမန်ထက်ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားမယ်၊ တခြားသော ဝေဒနာတွေပါ ခံစားလာရမယ်ဆိုရင်တော့ ကူးစက်ရောဂါ တစ်မျိုးမျိုး ခံစားနေရတာကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးထဲမှာတော့ Hello ဆရာဝန်အမျိုးသမီးပရိတ်သတ်တွေအတွက် မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်များရဲ့ အရောင်တွေက ပြောပြနေတဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေတွေ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။
၁။ အနီရောင်နဲ့ အညိုရောင်
ဓမ္မတာ လာနေချိန်မှာ အနီရောင်နဲ့ အညိုရောင် မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်တွေထွက်ရှိတယ်ဆိုတာ ပုံမှန်ပါပဲ။ အရောင်အနေနဲ့တော့ အနီရောင်တောက်တောက်ကနေ အညိုရောင် အထိ ပြောင်းလဲနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဓမ္မတာ လာနေတဲ့အချိန်သာမကဘဲ လတစ်လလုံး ဒီလို အရောင် စွန့်ပစ်အရည်တွေ ဆင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ ကူးစက်ရောဂါ ခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုပြနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အနီရောင်နဲ့ အညိုရောင် စွန့်ပစ်အရည်တွေ ဆင်းနေရခြင်းဟာ ဓမ္မတာ ပုံမမှန်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့သော အမျိုးသမီးတွေကျတော့ ဓမ္မတာ ပုံမမှန်ခြင်း၊ သန္ဓေတားနည်းတွေနဲ့ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ဒီလို မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်တွေရဲ့ အရောင်ပြောင်းလဲရတာပါ။
၂။ နို့နှစ်ရောင်နဲ့ အဖြူရောင်။
ဥခွံရောင်နဲ့ နို့နှစ်ရောင် လို့ အဖြူရောင် စွန့်ပစ်အရည်တွေ ဆင်းခြင်းကလည်း ပုံမှန်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို အဖြူရောင် စွန့်ပစ်အရည်တွေ ဆင်းရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ မွေးလမ်းကြောင်း သဘာဝ ချောဆီအဖြစ် ထုတ်လုပ်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို စွန့်ပစ်အရည်တွေဟာ မွေးလမ်းကြောင်း တစ်ရှူးကျန်းမာစေဖို့နဲ့ လိင်ဆက်ဆံချိန် ပွတ်တိုက်မှု နည်းပါးအောင် ပြုလုပ်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ အဝါရောင်ဖျော့နဲ့ အစိမ်းနုရောင်။
အဝါရောင်ဖျော့နဲ့ အစိမ်းရောင် မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်တွေ ဆင်းခြင်းကလည်း ပုံမှန်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို စွန့်ပစ်အရည်တွေ ဆင်းရခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းက အစားအစာနဲ့ တစ်ခြားသော ဖြည့်စွက်စာတွေကြောင့် ပြောင်းရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတည်းမဟုတ်ဘဲ အကြိမ်ရေများစွာ ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်နေနိုင်တာကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။
၄။ ပန်းရောင်ရင့် မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်။
အနီရောင်ဖျော့ကနေ ပန်းရောင်ရင့် မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည် တွေ ဆင်းခြင်းက ဓမ္မတာ စက်ဝန်းရဲ့ အစ ကို ညွှန်ပြနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ပုံမှန် ဓမ္မတာ စက်ဝန်း အစ လာရမယ့် အချိန်မဟုတ်ဘဲ တခြား အချိန်တွေမှာပါဆင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပွားရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး လိင်ဆက်ဆံပြီး ချိန် သွေးအနည်းငယ်ထွက်ရင် မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်ကို ပန်းရောင် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၅။ မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည် အကြည်ရောင်။
မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည် အကြည်ရောင်ကနေ အဖြူရောင် အထိ ဆင်းခြင်းဟာ သာမန်အားဖြင့် ပုံမှန် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးလမ်းကြောင်းဟာ သူ့ဘာသာ သန့်ရှင်းရေး လုပ်နိုင်တဲ့ အင်္ဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး ဒီလို မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည် အကြည်ရောင် ဆင်းခြင်းဟာ ကျန်းမာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က သန့်ရှင်းရေး လုပ်နေတဲ့ ဖြစ်စဉ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓမ္မတာ စက်ဝန်းရဲ့ ၁၄ ရက်ကာလလောက်အရောက်မှာတော့ မျိုးဥကြွေပြီး သားအိမ်ခေါင်း အကျိအချွဲတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့အတွက် မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည် အကြည်ရောင်ဆင်းနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်း ဟော်မုန်းတွေ ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အတွက် မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်အကြည်ရောင်ဆင်းနိုင်ပြီး ပမာဏ ပိုများလာနိုင်ပါတယ်။ လိင်စိတ်ထကြွတဲ့အချိန်မှာလည်း မွေးလမ်းကြောင်းအတွင်းက သွေးကြောတွေဟာ ပြန့်ကားလာနိုင်ပြီး အရည်တွေက သွေးကြောတွင်းမှ ဖြတ်သန်းလာကာ ရေကဲ့သို့ ကြည်လင်တဲ့
မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်တွေကို ဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါက ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်ပါပဲ။
၆။ မီးခိုးရောင်၊ ခဲရောင် မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်။
မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်အဖြူရောင်ကနေ မီးခိုးရောင် ပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန် (သို့မဟုတ်) သားဖွားမီးယပ် ဆရာဝန် (OB/GYN) ထံ အမြန်ဆုံးသွားရောင်ပြသသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည် မီးခိုးရောင်ဆင်းရခြင်းဟာ bacterial vaginosis (BV) လို့ခေါ်တဲ့ မွေးလမ်းကြောင်း ဘက်တီးရီးယား ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်နေနိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဒီရောဂါဟာ အမျိုးသမီးတွေမှာ အင်မတန် အဖြစ်များပြီးပြီး ဘက်တီးရီးယား တိုက်ဖျက်လိမ်းဆေးတွေနဲ့ ပဋိဇီဝဆေးတွေ သောက်သုံးလိုက်ရင်တော့ ပျောက်ကင်းသွားတတ်ပါတယ်။
မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်တွေ အရောင်ပြောင်းတယ်ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်က ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်နေသေးတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်တွေ အရောင်ပြောင်းတဲ့အပြင် အောက်ပါ ဝေဒနာတွေကိုပါ ပူးတွဲခံစားနေရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ ဖြစ်နေကြောင်းကို ပြနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်အရောင်ပြောင်းခြင်းနဲ့ အတူ အောက်ပါ ဝေဒနာတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဆရာဝန်ထံ သွားရောက် ပြသသင့်ပါတယ်။ ဝေဒနာတွေကတော့-
အမြုပ်ကဲ့သို့သော မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်၊
မီးခိုးရောင် မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်၊
ဓမ္မတာ လာခြင်းကြောင့် မဟုတ်တဲ့ မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်။
မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်အရောင်ပြောင်းခြင်းနဲ့ အတူအထက်ပါ ဝေဒနာတွေက ပြနေနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေး အခြေအနေတွေကတော့
၁။ မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည် အကြည်ရောင်ဆိုရင် ဟော်မုန်း မညီမျှမှုကို ပြနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည် အဖြူရောင်ဆင်းတာနဲ့ အတူ အထက်ပါ ဝေဒနာတွေကိုပါ ခံစားနေရမယ်ဆိုရင်တော့ မှိုကူးစက်ရောဂါ နဲ့ ဘတ်တီးရီးယား ကူးစက်ရောဂါ (bacterial vaginosis (BV)) ခံစားနေရတာကိုပြနေတာပါ။
၃။ အဝါရောင်ဖျော့နဲ့ အစိမ်းနုရောင် မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည် ဆင်းတာနဲ့ အတူ အထက်ပါ ဝေဒနာတွေကိုပါ ခံစားနေရမယ်ဆိုရင်တော့ ဆီးပူညောင်းကျ (gonorrhea) နဲ့ Chlamydia trachomatis ဆိုတဲ့ ဘတ်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တဲ့ Chlamydia ရောဂါ၊ Trichomonas vaginalis လို့ခေါ်တဲ့ ကပ်ပါး ပိုရိုတိုဇွန် ကောင်ကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ လိင်မှတစ်ဆင့်တဲ့ ကူးစက်တဲ့ Trichomoniasis ကူးစက်ရောဂါ နဲ့ Desquamative Inflammatory Vaginitisလို့ခေါ်တဲ့ မွေးလမ်းကြောင်း အနားသတ်တွေ ရောင်ကိုင်းလာတဲ့ ဝေဒနာ ခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။
၄။ အနီရောင် မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည် ဆင်းတာနဲ့ အတူ အထက်ပါ ဝေဒနာတွေကိုပါ ခံစားနေရမယ်ဆိုရင်တော့ မွေးလမ်းကြောင်း ကူးစက်ရောဂါ၊ သားအိမ်ခေါင်းနဲ့ သားအိမ်ကင်ဆာ ခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။
၅။ မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်ပန်းရောင်နဲ့ အတူ အထက်ပါ ဝေဒနာတွေခံစားနေရမယ်ဆိုရင်တော့ သားအိမ်ခေါင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဝေဒနာခံစားနေရတာကို ပြနေတာပါ။
၆။ မီးခိုးရောင် မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်နဲ့ အထက်ပါ ဝေဒနာတွေပါ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဘက်တီးရီးယား ကူးစက်ရောဂါ (bacterial vaginosis (BV)) ခံစားနေရတာကိုပြနေတာပါ။
မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်ဆင်းခြင်းဆိုတာ သူ့ချည်းသက်သက်ဆိုရင် သာမန်အချိန်မှာ မွေးလမ်းကြောင်းက သန့်ရှင်းရေး၊ ကူးစက်ရောဂါတွေကို ဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ ချောဆီ အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လုပ်ဆောင်တဲ့ အရာ တစ်မျိုးပါ။ ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်အရောင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် လိင်ဆက်ဆံချိန် မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်ဆင်းခြင်းဟာ လိင်ဆက်ဆံရာမှာ ချောဆီအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့ မျိုးဥကြွေချိန် မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည် ပျစ်လာခြင်းက သုတ်ကောင်တွေ မျိုးဥဆီသို့ သွားရာလမ်းမှာ လွယ်ကူစေဖို့ အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်ရောင်နဲ့ ပမာဏဟာ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ မွေးလမ်းကြောင်း စွန့်ပစ်အရည်တွေက ရုတ်တရက် အရောင်ပြောင်းသွားမယ်၊ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာမယ်၊ ပမာဏပိုများလာမယ်၊ အနံ့အသက်ပြောင်းလာမယ်၊ အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဝေဒနာတွေ ဖြစ်တဲ့ မွေးလမ်းကြောင်းယားယံခြင်းနဲ့ ဆီးခုံဧရိယာ တစ်ဝိုက် နာကျင်ခြင်း စတာတွေနဲ့ အတူပူးတွဲ ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်နေတာကို ပြနေနိုင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးသွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။
Accessed (24. June. 2018)